Reunion Air Austral monina any La Réunion no lasa mpanjifa A220 voalohany eto amin'ny Ranomasimbe Indianina
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Reunion Air Austral monina any La Réunion no lasa mpanjifa A220 voalohany eto amin'ny Ranomasimbe Indianina
Oktobra 14, 2019
air austral a220 300 1 1
Airbus A220 mifaninana amin'i Boeing B737 Max, ary mazava ho azy, Air Austral monina ao La Réunion, dia nanao sonia baiko hentitra ho an'ny fiaramanidina A220 telo. Reunion dia faritany frantsay ranomasimbe indianina. Airbus dia orinasa frantsay.
Mpikambana farany an'ny Airbus. Amin'ity baiko ity dia lasa mpanjifa A220 voalohany i Air Austral monina ao amin'ny faritry ny Ranomasimbe Indianina. Mahazo tombony amin'ny fihenan'ny 20% amin'ny fandoroana solika sy CO2 emissions, ny A220s dia ahafahan'ny Air Austral mampihena ny vidiny sy ny dian-tanan'ny karbaona amin'ny làlana iraisam-pirenena ao amin'ny faritra.
"Ny Air Austral dia nifidy ny A220-300 ho ampahany amin'ny fanavaozana ny sambo Medium sy Short Haul. Ireo fiaramanidina taranaka vaovao ireo dia hanatevin-daharana ny kaompaniam-pitaterana manomboka amin'ny faran'ny taona 2020 miaraka amin'ny tanjon'ny fampirindrana ny ampahan'ny fiaramanidina sy ny fanamafisana ny asany "hoy i Marie-Joseph Malé, Lehiben'ny Executive Executive an'ny Air Austral. Ny zava-bita ara-toekarena sy ara-toekarena an'ny A220 dia manokatra fahafaha-manao vaovao amin'ny fampandrosoana ny tambajotram-paritra misy antsika avy amin'ny ivon-toeranay - Nosy Réunion - amin'ny fomba mahomby sy mitombina. Ny maodelin'ny fahaizan'ny seza 132, izay mora miovaova kokoa, dia hahafahantsika mampitombo ny fahita matetika rehefa manome fiononana bebe kokoa ho an'ny mpanjifantsika sy ny ekipana ", hoy ihany izy.
Ny famolavolana ny fiaramanidina vaovao iray madio dia mamela seza bebe kokoa, manolotra fidiram-bola fanampiny ho an'ny orinasam-pitaterana an'habakabaka, indrindra ireo izay any amin'ny faritra lavitra, ary ny fahafahan'ny volan'ny entana azo ampiasaina.
Ny A220 no hany fiaramanidina namboarina ho an'ny tsena seza 100-150; Izy io dia manome fahombiazan'ny solika tsy hay tohaina sy fampiononana mpandeha an-habakabaka amin'ny fiaramanidina tokana. Ny A220 dia manambatra aerodinamika manara-penitra, fitaovana mandroso ary milina PW1500G an'ny Pratt & Whitney ho an'ny milina turbofan farany ambony hanolotra farafahakeliny 20 isan-jaton'ny fandoroana solika isaky ny seza raha ampitahaina amin'ny fiaramanidina teo aloha, miaraka amin'ny emissions ambany indrindra sy dian-tongotra mihena. Ny A220 dia manolotra ny fahombiazan'ny fiaramanidina mandeha an-tokana lehibe kokoa.
Ny A220 dia nanana boky kaomandy misy fiaramanidina maherin'ny 500 tamin'ny faran'ny volana septambra 2019.
Rosia hanavao sy hanitatra ny tambajotram-pifamoivoizana any Arabia Saodita
Nahazo $ 3.7 miliara dolara ny fizahan-tany ao Jamaika miaraka amin'ireo mpitsidika 700,000 ao anatin'ny 3 taona
Filohan'ny Italia momba ny torolàlana G20 Roma ho an'ny hoavin'ny fizahantany